St. Maarten na-anabata ndị nna na-enwe obi ụtọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » St. Maarten na-anabata ndị nna na-enwe obi ụtọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Resorts • Akụkọ Sint Maarten na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Malọ ọrụ St. Maarten Tourist Bureau nwere obi ụtọ ịnabata ndị a ma ama Patriots Cheerleaders n'àgwàetiti ahụ site na July 23-30.
Divi Little Bay Beach Resort na St Maarten Tourist Bureau nwere obi ụtọ ịnabata ndị a ma ama Patriots Cheerleaders n'àgwàetiti ahụ site na July 23-30 ka ha na-agbapụ kalenda uwe mmiri na-ewu ewu kwa afọ na vidiyo dị iche iche. Mgbe ha nọ n'àgwàetiti ahụ, ụmụ nwanyị ahụ ga-enyocha ala, ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme nke St Maarten site na mmemme dịgasị iche iche.
"Anyị na-asọpụrụ na ndị Patriots Cheerleaders họọrọ ime ka a mata St. Maarten na Divi Little Bay site n'ịgba kalenda ha na-abịanụ n'àgwàetiti ahụ," ka Marco Galaverna, Divi Resorts President & COO kwuru. "Ọ bụ ogologo ụzọ iji gbakee kemgbe oke ifufe nke afọ gara aga, mana anyị nwere obi ụtọ igosi ụmụ nwanyị a otu anyị siri wughachi ngwa ngwa ma gosipụta ihe kpatara eji mara St. Maarten dị ka agwaetiti enyi na enyi."
Na-anọchi anya 5X Super Bowl Champion New England Patriots, ndị Patriots Cheerleaders na-anabata ọtụtụ puku ndị Fans n'akụkụ akụkụ nke Gillette Stadium, na-ekere òkè na ọrụ ọma na ihu na-enwe ma na-enwe obi ụtọ na mmemme ndị dị elu dịka Super Bowls, Pro Bowls, na egwuregwu mba ụwa.
Mgbe ha na-anaghị achọ inwe igwefoto na St. ọrụ mgbasa ozi nke obodo.
"Anyị emeela ụfọdụ ihe omume na-atọ ụtọ n'ezie ebe ndị Patriots Cheerleaders nọ ebe a, gụnyere mgbede Sunset Sail with Aqua Mania Adventures, Karaoke Night, njem ime obodo na BBQ Beach Dinner," ka Divi Little Bay General Manager Anne-Marie Brooks kwuru . "Anyị na-atụ anya n'ezie igosi ndị na-enwe ọ everythingụ ihe niile agwaetiti anyị mara mma ga-enye, anyị makwaara na ha nwere obi ụtọ izute ndị obodo mgbe ha na-apụ na njem ha."
Banyere St Maarten Tourist Bureau:
St. Maarten bụ agwaetiti kacha nta n'ụwa ka mba abụọ ga - ekekọrịta - Alaeze Netherlands na France - na --emepụta ebe nwere amara na European flair. N'ịbụ nke dị na njedebe ngwụcha ugwu nke obere Antilles, kilomita 37 nke agwaetiti ahụ nwere osimiri 37 dị egwu ma bụrụkwa ebe ọtụtụ ebe nkiri na akụkọ ezinụlọ. Direct ikuku ọrụ dị Princess Juliana International Airport si isi US na Canada obodo.